Imidlalo engcono kakhulu ye-chess ye-PC | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | Kubuyekezwe ku- 09/04/2021 18:39 | General, Imidlalo yevidiyo
Uma kukhona umdlalo webhodi wakudala futhi omnandi, lapho ukugxila kwethu kubalulekile ukuze sinqobe, leyo ngokungangabazeki i-Chess, umdlalo webhodi lapho amasu nokucabanga ngokuhamba ngakunye ngokucophelela kuzoba ukhiye wokugcina unqobile. Lo mdlalo uqale ekuqaleni eminyakeni engama-600/800 emva kukaKristu futhi kwaze kwaba ngekhulu lesi-XNUMX lapho wangena eSpain ngama-Arabhu. Ngaphandle kokungabaza, umdlalo womlando ohlala umncane yize ulahlekelwe ngumusi omningi eminyakeni yedijithali.
Njengamanje kujwayelekile kakhulu ukuthi singatholi muntu odlala umdlalo we-Chess. Ngesikhathi samaselula nemidlalo yevidiyo, kubonakala kunzima ukubona umfana noma indoda eneminyaka ephakathi nendawo idlala umdlalo ebhodini yakudala, ngakho-ke inketho enhle kakhulu uma sifuna ukudlala i-chess ukuyenza ngendlela yevidiyo umdlalo. Kepha Akuwona umdlalo kuphela, i-chess ibhekwa njengomdlalo wobuhlakani futhi imiqhudelwano emikhulu idlalwa emhlabeni wonke ngemidlalo engahlala amahora angu-6. Kulesi sihloko sizobona imidlalo yamahhala ye-chess ye-PC ivezwe obala.
1 Imidlalo ye-Chess ye-PC
1.2 I-Chess Ultra
1.3 Izihloko ze-chess
1.4 IZen Chess: Mate ku-One
1.6 I-Shredder Chess
1.7 Ithebhulethi Simulator
2 Amawebhusayithi wokudlala i-chess
Imidlalo ye-Chess ye-PC
Siya imininingwane ohlwini oluncane leyo midlalo ye-chess ekhanga kakhulu esingayithola kungxenyekazi ye-PC, yonke inesicelo esikhokhelwayo noma samahhala sokuzikhethela komdlali. Singathola kusuka kumdlalo wakudala ngobukhulu obungu-2 noma imidlalo enwetshiwe ngobukhulu obungu-3 ngehluzo ezingokoqobo.
Siqala ngomunye wemidlalo ye-chess enehluzo ezinhle kakhulu, umdlalo ogxile ikakhulukazi kulabo badlali abangenakho okuhlangenwe nakho abafuna ukujabulela isipiliyoni esanelisa njengoba sijabulisa iso. Isihloko kakhulu kunconywe ama-greats alo mdlalo ngamazwana kanye nedatha enkulu yezinye zazo, njengoKasparov omkhulu. Lo mdlalo uphinde uhlaziye indlela yethu yokudlala ukuze sizibeke ezingeni futhi simatanise nabaphikisi bezinga lethu elifanayo.
Sinesithangami sangaphakathi lapho singasusa khona ukungabaza nabanye abadlali noma siphawule ngemidlalo yabo edlalwa kweminye imidlalo. Kodwa-ke kwalo mdlalo omuhle yintengo yawo futhi lokho kubiza ama-euro angama-50 ngakho-ke yize kungumdlalo othokozisayo intengo yayo iyenqabela kancane uma sifuna ukudlala umdlalo owodwa.
Sigqamise isigaba semifanekiso yomdlalo owedlule futhi le Chess Ultra ayikude kakhulu kulokhu, ngoba ngomunye wemidlalo ye-chess enengxenye yezobuchwepheshe ehamba phambili ohlwini. Umdlalo uyakwazi ukusikhombisa izithombe ezifika kusixazululo sendabuko se-4K. Inemodi yokudlala eyodwa nemodi enkulu yabadlali abaningi lapho singathola khona imbangi cishe ngaso leso sikhathi.
Uma esikufunayo ukudlala wedwa, sinezindlela eziningi zemidlalo nobuhlakani bokusebenza obusebenze kakhulu, businikeza imidlalo eqinile nehlala isikhathi eside ngokungathi ngumdlalo wangempela. Umdlalo onconywe kakhulu kunoma yimuphi umlandeli we-chess. Ngokungafani neyangaphambilini, lena inenani elikhangayo kakhulu elingu- € 5,19 okwamanje Umusi.
Manje siya kumdlalo wokuqala wamahhala ohlwini futhi kungahle kube ngenye yezinto ezinhle kakhulu ngoba ithokozela isigaba esihle sobuchwepheshe nemininingwane enhle. Inikela ngemininingwane ephezulu kakhulu ebhodini nasezingcezwini. Umdlalo othandwa kakhulu phakathi kwabalandeli be-chess ngoba umahhala futhi ngenxa yomphakathi omkhulu ohambisana nawo.
Sinamazinga ahlukene obunzima bokukwazi ukujabulela umdlalo ngaphandle kwekhono lethu. Kunconywa ukuthi kuqalwe kokuphansi uma sigqwalile. Njengoba sishilo ekuqaleni, umdlalo ukhululekile ngokuphelele futhi singawulanda kowakho Iwebhusayithi.
IZen Chess: Mate ku-One
Sifikile komunye wemidlalo elula futhi emfushane kakhulu ohlwini, ngomklamo omncane kakhulu lokho kusikhumbuza okuningi ngomdlalo weselula kunomdlalo wekhompyutha, ngesigaba semifanekiso esenziwe lula. Le Zen Chess igxile kuzithameli ezingajwayelekile ezifuna ukudlala imidlalo evulelekile futhi esheshayo ngaphandle kwempumuzo enkulu.
Ngaphakathi sithola izinselelo eziningi okufanele sizinqobe ezenziwe ngamakhosi amahle kakhulu emhlabeni we-chessNjengoba sithuthuka, izinselelo ziba nzima ngokwengeziwe, yize inhloso yethu ihlala ifana, ukubheka ngokushesha okukhulu ukuqeda ukuwina umdlalo. Intengo yayo nayo ilula futhi singayithola ku I-Steam nge- € 0,99, kunconywe kakhulu uma lokho esikufunayo kumnandi nje.
ILucas Chess ngumdlalo ogqame ngokuba ngumthombo ovulekile, ngakho-ke singayilanda mahhala kusuka kuwebhusayithi yayo. Sinezindlela ezingama-40 zemidlalo lapho singaqala khona emazingeni aphansi ukuzithuthukisa size sidlale imidlalo njengenkosi yangempela. Ubuhlakani bokufakelwa buzivumelanisa ngokuphelele nezinga ngalinye lobunzima lokho Ezingeni layo eliphakeme, lisinikeza imidlalo yama-epic yekhwalithi enhle kakhulu.
Sinemodi yabadlali abaningi yokubhekana nabadlali abavela kuwo wonke umhlaba ngekhwalithi enhle kakhulu. Izici zomdlalo inqwaba yezilungiselelo nokulungiselelwa ngakho-ke singaguqula imidlalo nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaleyo ndlela singaphazamisi umdlalo uma kukhona okungekho njengoba sifuna.
Umdlalo othakazelisa kakhulu ukuqala emhlabeni we-chess, ngoba wuhlelo olwenzelwe ukufunda nokufunda. Ithole imiklomelo eminingi ekhethekile kulo mkhakha ngobulula bayo kanye nayo inani elikhulu lamazinga obunzima, evumela ukuzivumelanisa nanoma yiluphi uhlobo lomdlali. Into enhle ngalolu hlelo ukuthi luyi-multiplatform futhi singayithola kuwo womabili amakhompyutha nakuma-mobiles, ngakho-ke kunconywa kakhulu.
Iphutha layo elikhulu lisentengo Futhi akuwona umdlalo oshibhile, intengo yawo ingama- € 70 yize inenguqulo yesivivinyo yezinsuku ezingama-30 ye-Mac noma iWindows, kanti inguquko yeselula ibiza cishe ama- € 10 futhi inenhlobo lamahhala elisikiwe esingajabulela kulo uma sijwayelekile abadlali.
Njengoba igama layo lisho ukuthi iyi-simulator yebhodi enhle, ithole ukuthandwa okuningi eminyakeni yamuva ngenxa yemidlalo yayo ehlukahlukene, kepha igcizelela isici sayo somdlalo we-chess Kunconywa ezinhlakeni eziningi ezinikezelwe chess. Ngokungafani neminye, lo mdlalo usivumela ukuthi sakhe umdlalo ngokuthanda kwethu ngemithetho yethu, okwenza i-chess iyeke ukuba yi-chess.
Futhi, njengoba sishilo, singadlala eminye imidlalo eminingi yebhodi yakudala, efana nabahloli, amakhadi, ama-domino noma i-Warhammer. Sinemodi eku-inthanethi yokudlala ngokumelene nabadlali abavela kuwo wonke umhlaba ngamaseva we-Steam. Ukusebenzisana kwalo mdlalo ukuthi uma umdlalo ungahambi njengoba bekulindelekile, singakwazi ukukhipha yonke intukuthelo yethu ngokumelene nebhodi lomdlalo bese siqeda umdlalo ngendlela enzima, yize imbangi yethu ingahle ingahleki kakhulu. Umdlalo uyatholakala nge I-Steam nge- € 19,99 enguqulweni yayo ejwayelekile noma i- € 54,99 enguqulweni yayo yamaphakethe ama-4 efaka konke okuqukethwe kwayo okungeziwe.
Amawebhusayithi wokudlala i-chess
Lapha sizothola amanye amawebhusayithi lapho singadlala khona i-chess online ngaphandle kwesidingo sokufaka uhlelo lokusebenza kukhompyutha yethuFuthi asinazo izidingo eziphansi ngoba sizodlala ngokusakazwa kusuka kusiphequluli sethu sewebhu esiyintandokazi.
Iwebhusayithi edumile futhi ephelele lapho singathola khona izinjini eziningi zemidlalo nebhodi le-rankings lapho singathola imidlalo engaphezu kwezigidi ezi-5 kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Uma sifuna ukudlala ku-inthanethi, sizokufanisa nezimbangi zethu ngokwezinga lekhono lethu. Sinemodi yokudlala eyodwa lapho kuzodingeka sikhethe ubunzima.
Lolu hlelo lwewebhu iqukethe izilungiselelo eziningi Okomdlalo, yize kungabonakala kulula kepha kuyasebenza impela futhi okuhle kakhulu ukuthi singakwazi ukukufinyelela kunoma iyiphi ipulatifomu lapho sinesiphequluli sewebhu esihlanganisiwe.
Okunye Iwebhusayithi ethandwa kakhulu phakathi kwabalandeli be-chess, kule webhusayithi singahlola amakhono ethu nabanye abadlali abaku-inthanethi, futhi sidlale ngokukhalipha okunamandla okufakelwa. Siphinde sithole inqwaba yamathiphu nezifundo zokuthuthukisa amakhono ethu futhi sikhule ngokuncintisana.
Uma sibuza sithola zonke izinhlobo zolwazi nemibhalo enikezwe abaphathi be-chess abahamba phambili, kanye nebhodi lezindaba lapho singathola khona zonke izindaba eziphathelene ne-chess noma imicimbi ezayo. Njengewebhusayithi eyedlule, lokhu kungasetshenziswa kunoma iyiphi idivayisi enesiphequluli sewebhu esihlanganisiwe, ngakho-ke singakujabulela kusuka kuselula yethu.
Uma i-chess isilela futhi sifuna imizwa enamandla, singabheka lena enye Uhlu lomdlalo wevidiyo lapho sithola khona imidlalo engcono kakhulu yezithuthuthu ye-PC. Kufanele kuthiwe sivulekele noma iziphi iziphakamiso futhi sizojabula ukukusiza emazwaneni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » The best chess imidlalo for PC
I-Sonos Roam, encane kodwa enolaka [BUYEKEZA]